प्रधानमन्त्री ज्यू, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुस्! :: Setopati
प्रधानमन्त्री ज्यू, नमस्कार!
कथा, कविता र टुक्काहरुको प्रयोग नगरी सिधैँ भन्दा म यो देशको आफूलाई सचेत भन्न रुचाउने भित्रको नागरिक हुँ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि, म तपाईको शक्तिशाली सरकारको शुभचिन्तक हुँ। तर मलाई लाग्दैन कि तपाई मेरो कुरा पत्याउनु हुन्छ।
मैले तपाई र तपाईको सरकारको भलो चिताउनुका पछाडि मेरो आफ्नै स्वार्थ थियो र छ। स्थाई सरकारको अनुभव मैले मेरो राजनैतिक चेतना आएपछि गर्न पाएको थिइनँ। साढे दुई वर्ष अगाडि तापईको अगुवाइमा सरकार बन्दै गर्दा म निक्कै उत्साहित थिएँ। अहिले मेरो त्यो उत्साहको एक अंश पनि बाँकी नपाउँदा मलाई कस्तो हुन्छ? त्यो तपाई बुझ्नु हुन्न।
म केटाकेटी छँदा यो देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, भनेको सुन्ने गरेको थिएँ। राजा विरेन्द्र त साह्रै राम्रो मान्छे हो, सल्हाकार र रानीले बिगारे। म तरुनो हुँदा गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एक वर्ष जतिपछि फेरि त्यही कुरो सुन्न थालेँ, छोरी र सल्हाकारले बिगारे।
अहिले अधवैंशे भएको छु। फेरि त्यही कुरो, नाकाबन्दी ताकाको तपाईको छवीले गर्दा सिधै तपाईलाई नै खराब वा नालायक त भनिहालेका छैनन् मान्छेले, तिनै सल्हाकारलाई गाली गरको सुन्छु। किन यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू? ती खराबलाई पाखा लगाउन सकिन्न?
मलाई लागेको कुरो, सत्य नहुन पनि सक्छ। तपाईको कमजोरी मान्छे चिन्न नसक्नु पनि हो जस्तो लाग्छ। विगतका संचार मन्त्री कुनै पनि कोणबाट मन्त्री हुन योग्य थिएनन्। प्रधानमन्त्री ज्यू, मन्त्री भनेको त सरकारको इज्जत बडाउने शालिन पो हुनु पर्छ ,हैन र? छुच्चो त कुकुर पनि हुन्छ नि।
यातायात मन्त्री भएकाले त्यत्रो समय माखो मारेनन्, अहिले बसन्त नेङवाङ्गले राम्रो गरे त। हामी जनता राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्छौं हजुर। खाली हामीलाई शंका मात्र नगरियोस्, यो एउटा अनुरोध हो। हालै मात्र तपाईले नियुक्त गरका रेल विभागका माहाप्रबन्धक, तपाईकै सह-अध्यक्षको विरोध गरेर नथाक्ने पात्र हुन्। उनी पनि शालीन व्यक्ति होइनन्।
तपाईलाई छुद्रता माथि किन यति विश्वास? त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईको सपनाको जिम्मेवारी दिँदा, त्यो सपना साकार होला जस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्री ज्यू? भोलि सह-अध्यक्षले प्रश्न गर्दा के भन्नु हुन्छ? कि सिधै तिम्रो हाइट घटाउन मैले यसो गरेँ भन्नु हुन्छ? यसरी पार्टी एकिकरण होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अहिले पार्टी फुट्यो भने ठूलो घाटा कस्लाई हुन्छ? सोच्नु भएको छ? के सल्लाह दिन्छन् तपाईका सल्लाहकारले?
तपाईले मान्नै पर्छ अब तपाईको सरकार सबै तिर असफल भएको छ। कोभिड-१९ को नियन्त्रण हामीले सबै देशलेभन्दा राम्ररी गर्न सक्ने थियौं, अब आएर सबैको भन्दा बिजोग हाम्रो हुने भयो। हामीले लकडाउन गर्न हतार गर्यौं, अलिक राम्रो तयारी गरेर बल्ल लकडाउनमा जाने बेला हुँदै थियो। लकडाउनमै संक्रमितको संख्या ५ हजार नाग्यो, तयारी केही छैन। यो संख्या निक्कै भयावह हुनेछ।
रामायणका काण्डभन्दा धेरै काण्ड भए। अब त, सुन काण्ड, निर्मला काण्ड, प्रेस काण्ड, कति हुन् कति। सबैमा दोष तपाई मिडिया र प्रतिपक्षको देख्नु हुन्छ। विचरा त्यो नाम मात्रको प्रतिपक्ष, त्यसलाई के दोष दिनु? तपाईले अलिकति मात्र विवेक संगत काम गरको भए त्यो सधैँका लागि सकिने थियो, फेरी पलाउने भयो।
तपाईका गृहमन्त्री निर्मला काण्डका बारेमा फेरि-फेरि पनि यस्तो बलात्कारको घटना घट्न सक्छ भन्छन्, रुकुमका बारेमा बोल्दा अमेरिकामा त छ विभेद भन्छन्। हटाउनु पर्दैन यस्ता नालायकलाई? सचिवालयमा बहुमतको लोभमा देश डुब्न नदिनुस् प्रधानमन्त्री ज्यू। राम्रो गर्नुस्, जनताले तपाईलाई हटाउन दिने छैनन्। यो भने मेरो अनुमान होइन, वास्तविकता हो।
हाल भएको युवाहरुको प्रदर्शनका बारेमा कत्तिको जानकार हुन दिएका छन् बास्कोटाहरुले त्यो त थाहा भएन, तर यस्लाई हल्का रुपमा लिदै नलिनु होला। मध्यम वर्गीय युवाहरुको संकेत मिलाउन सक्यो भने धेरै फाइदाकारी र सकेन भने ज्यादै डरलाग्दो हुन्छ बेलामा सचेत हुनु होला। तपाई आफै कविता लेख्ने मान्छे, यो कविता सुन्नु भएकै होलाः
अग्ला सिंहासनहरु ढले क्रुर अन्याय काँपे
सामन्तीका खडहरमहाँ क्राँन्तिका दुत नाचे
काला धब्बा रगतहरुका खुर्किए स्वार्थ हारे
गर्जी-गर्जी जब युवकले ज्यानको आश मारे। धिमिरे (नवयुवक)
मेरो र म जस्ता सबै नेपालीको भाग्य तपाईको सफलता र असफलतामा निर्भर छ प्रधानमन्त्री ज्यू। बिजुली गाडीको कर के गरेको? त्यस्तो पनि गर्नु हुन्छ? यस्ता कति छन् कति कुराहरु, तपाई असफल हुनुको अर्थ अर्को चुनावमा कसैको बहुमत नआउने पक्का हो। आजै चुनाव गर्ने हो भने नेकपा दोस्रो हुने पक्का छ।
बेला छ, मलाई फेरि तापाईको पार्टीलाई भोट दिन मन छ। कृपया मलाई निर्वाचनमा भोट हाल्न जानै मन नलाग्ने नबनाइ दिनुस्, यत्ति भए पुग्छ। भ्रष्टाचार भएको छ प्रधानमन्त्री ज्यू, कारबाही गर्नुस्। मिडियाले राम्रो पनि देख्छ र लेख्छ पनि, विचराहरु के गरुन्? राम्रो नै नभएपछि जे छ, त्यो त लेख्नै पर्यो। कृपया एक पटक फुर्सद लिएर सोच्नुस, तपाईको ठाउँमा अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री थियो भने यो अवस्थामा तपाई के-के भन्दै हुनुहुने थियो होला?
अन्त्यमा बढी प्रशंसा गर्नेहरु तपाईका सच्चा शुभ चिन्तक होइनन्, ती सबै स्वार्थी हुन्। तीबाट बच्नुहोस्, तपाईको साथमा नेपाली जनता छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २, २०७७, ०३:१८:००